Peji mitsara: Dhonza uye Donhedza WordPress Theming | Martech Zone
Peji mitsara: Dhonza uye Donhedza WordPress Theming
China, May 12, 2011 Svondo, Ndira 19, 2014 Douglas Karr
Sezvineiwo, ini ndanga ndichingo taura nesangano mangwanani ano pane kuomarara kwetinging mukati meWordPress. Kune vanhu sesu vari vaviri PHP vashanduri, vaita toni yematimu nemapulagi uye vanonyatsonzwisisa iyo WordPress API, haina kushata. Nehurombo, izvo hazvisvikike kune mamwe makambani nevanhu vamwe, zvakadaro. Pazasi mutsara - kuve nekufonera unogadzira pese paunoshuva kugadzirisa marongero ako kana theme inogona kudhura!
PageLine iri kuchinja izvi nechigadzirwa chavo, PlatformPro. Platform yekumberi-kumagumo dhizaini yakavakirwa pane brand-nyowani pfungwa inonzi zvikamu. Muchidimbu, zvikamu zvakafanana neWordPress majeti (dhonza-uye-kudonhedza zvemukati barbar) chete zvinoshanda zvakanyanya zvirinani kugadzira makuru magadzirirwo uye ekushandisa nema templates. Heano zvimwe zvezvikonzero nei zvikamu zvichishamisa:
Plug-and-Play Zvikamu zvakafanogadzirirwa zvidimbu zvewebhu dhizaini, izvo zvinogona kuve zvakaomarara (semuenzaniso chinotsvedza, kufamba, carousel, nezvimwe ..). Yese kodhi inoramba irimo uye inotarisirwa nechikamu API; saka zvese zvaungamboona ndeye nyore kudhonza uye kudonhedza interface uye sarudzo.
Kudzora Zvikamu kunogona kuiswa kana kudzimwa pane peji-ne-peji hwaro uye wobva wawedzera avo vega post- mhando uye sarudzo. Izvi zvinoreva kutonga kuzere kwemapeji ese pane yako saiti.
Kubudirira Kunogona kugadzirwa nekushandurwa nevakagadziri mune Base mwana theme. Izvi zvinoreva kuti vagadziri vanogona kuwedzera kana kushandura kudhonza & kudonhedza zvikamu mumasekondi.
Zvikamu zvakapusa zvinowedzera zvakajairwa html markup uye zvetsika zvikorekedzo (zvekuwedzera mashandiro). Izvi zvinoderedza pasi pane yakawanda kodhi uku ichikupa iwe mamwe mashandiro panguva imwe chete.
Zvimwe Zvimiro Iwe Zvaunoda
Kurongeka Builder - Pamusoro pezvitsva zvekudhonza & kudonhedza zvikamu, Platform zvakare ine inokwezva dhizaini yekuvaka yekumisikidza saizi yeyako saiti. Iwe unogona kusarudza new saiti upamhi, kana kumisikidza yega yega mashanu akasiyana mabara epadivi; wobva wasarudza dhizaini pane peji-ne-peji hwaro.
bbPress uye BuddyPress - Platform inotsigirawo kusangana neBuddyPress uye ine inoenderana bbPress forum theme (yekuvandudza edition). Iko kusanganisa hakuna musono uye kunopa vanoshandisa Platform chaiyo yehunyanzvi uye ine simba kuvapo.
Yakazara-Upamhi uye Yakagadziriswa-Hupamhi Modes - PageLine ine zvakare yakaverengerwa akasiyana dhizaini modhi. Pane nzira mbiri dzekuvaka yako saiti nePlatform. Yakazara-upamhi modhi inokutendera iwe kuve izere-hupamhi zvemukati zvemukati zvinhu (senge kumashure mifananidzo), uye yakagadzika-upamhi modhi inokupa iwe yakagadziriswa-hupamhi zvemukati uye kumashure zvinhu.
Base Mwana Musoro - Iyo Base mwana theme yakavakirwa kuti ikubatsire iwe kugadzirisa Platform nyore uye neyakanakisa- maitiro ekuvaka webhusaiti Iishandise kukanda mune imwe tsika yeCSS dhizaini, kana shandisa 'zvikorekedzo' kuwedzera kodhi senge HTML kana PHP kunzvimbo munzvimbo dzese dingindira. Vakavakawo nenzira iri nyore yekuti iwe uwedzere zvikamu zvetsika zvako!
Pricing - Mutengo weimwe pro rezinesi unodhura $ 95. Rezinesi rekushandisa rese rekushandisa richazotengeswa nemadhora zana nemakumi masere nemashanu, ayo anosanganisira kuenderana nebbPress foramu, grafiki uye zvinongedzo zvabviswa.
Tags: datasiftemail anopindurakunongedzera geoKushambadzira Vhidhiyonhare yakawanda-chiteshi
EyeTrackShop: Kutarisa Kwemaziso kuburikidza neWebhu Cam
May 12, 2011 pa 8: 29 PM
Platform chishandiso chakakura chekuvandudza pane WordPress! Varume ava vanoita basa rekuuraya nekuita kuti software yavo ive nyore kushandisa uye kusanganisira zvimwe zvinhu kupfuura zvaungazununguse tsvimbo hombe pa 🙂
Chengetedza basa rakanaka. Haugone kumirira kuti uone chii chinotevera!
May 13, 2011 pa 12: 59 AM
Ongororo huru Doug! Ndakamhanya ndichiyambuka PaltformPro svondo rapfuura ndichiverenga nettuts + blog uye ndikashamisika kana iri chaiyo yakanaka yetemusoro. Zvaiita kunge zvakanaka kuva zvechokwadi, asi ndinofara kuona zvarinogona kuita. Zvinogona kushandura zviri nyore nzira yandinogadzira saiti uye zvinoita sekunge inogona kundichengetera nguva yakawanda.
Kutenda nevhoti iyi yekuvimba!
May 15, 2011 pa 4: 40 AM
chinyorwa chikuru Doug, ini ndichangotenga izvi zvebuddypress saiti yandiri kuita. Ndine mukomana wangu mhiri kwemakungwa dhizaini ari kushanda pariri izvozvi. Ndiri kutarisira chaizvo kuti zviitwe
Ndira 7, 2012 na3: 27 PM
mhoro ndine mubvunzo: zvinoita here kuisa imwe menyu ine peji mutsetse, yepamusoro uye kuruboshwe menyu uye nekuisawo zvakavanzika mutemo en disclaimer chinongedzo petsoka? nekuti kuita izvi neshoko remazwi kwakaoma verry.
Ndira 7, 2012 na3: 34 PM
Hi Perla - iwe unoreva nePageline kana neyakajairika WordPress theme? Neshoko reWordPress, zviri nyore kwazvo kuwedzera imwe menyu uye chirevo chetsoka asi iwe unozofanirwa kutsvaga mumwe munhu anogona kugadzirisa kudingindira rako uye anoziva nzira yavo kutenderera WordPress. Kune toni yevanhu kunze uko vanozviita, zvakadaro. Ini ndaitsvaga 'wordpress dhizaini' munzvimbo yako paGoogle uye ndione zvaunowana!
Ndira 7, 2012 na5: 33 PM
mhoro ndine mubvunzo: zvinoita here kuisa imwe menyu ine peji
mutsara, yepamusoro uye kuruboshwe menyu uye zvakare kuisa yakavanzika mutemo en disclaimer
batanidza pane tsoka? nekuti kuita izvi neshoko remazwi kwakaoma verry
. ndinoreva nemapeji etsamba
Ndira 7, 2012 na5: 35 PM
ndinoreva nemitsetse yemapeji
Ndira 7, 2012 na5: 58 PM
Iwe unogona zvirokwazvo kuwedzera html nzvimbo mune tsoka apo iwe unogona kuwedzera iyo info. Handina chokwadi nezve yechipiri menyu, zvakadaro. Izvo zvinogona kuda rimwe basa!